Azerbaijàna : Ny Andron’ny ‘Achoura’ · Global Voices teny Malagasy
Azerbaijàna : Ny Andron'ny ‘Achoura’
Voadika ny 21 Desambra 2017 18:29 GMT
Omaly [7 Janoary] ny Achoura, fetim-pivavahana fahatsiarovana ny martioran'i Hussein, ilay zafikely lahin'ny mpaminany Mahomet, tamin'ny adin'i Kerbala. Matetika ampifandraisina amin'ny sarinà fikapohana amin'ny rojo vy io fety io, kanefa hafa ny fahitàna azy ao Azerbaijàna, firenena izay shiita ny maro an'isa saingy laika silamo ny any atsimon'i Kaokazy.
Tsy nahalala ilay fankalazàna ny 27 Months in Azerbaidjan (27 volana any Azerbaijàna), bilaogy iray an'ny ‘Peace Corps’ amerikana, saingy nahatsikaritra fa nisy zava-miseho (amin'ny teny anglisy, tahaka ireo rohy manaraka).
Teny an-dàlana ho any an-tsekoly aho io maraina io, tsikaritro fa mifamezivezy be ny olona eny rehetra eny, indrindra ho anà andro tena mangatsiaka. Niakanjo mainty ny olona, izay, matetika na dia lokon'akanjo nosafidiana hanaovana amin'ny andavanandro aza, dia toa milaza fa misy karazanà fisaonam-pirenena. Noheveriko fa misy ifandraisany amin'ny andro manjomboa teo amin'ny tantaran'i Azerbaijàna izany, kanefa rehefa niresaka tamin'ny namako aho dia tonga saina fa fetin'ny Achoura androany.
Tahaka ny nifanohitra ihany tamin'ilay adihevitra nataoko omaly hariva momba ny haavon'ny famerenana ho laika toa misy aty ny fanarahana miparitaka be an'io andro fisaonana ho an'ny imam Hussein io. Ny valinteny mahafa-po azoko omena dia, tsy mitovy ny tsirairay rehefa ny finoana no resahina, na eto, na any Amerika. […]
Nanana olana tamin'ny fiverenana tany Bakò i Thoughts on the Road, izay mitsidika any Gandja, ary naneho ny heviny momba ilay fety.
Andro manjombon'ny janoary. Tsy ilaina tantaraina, mando sady mangatsiaka. Io maraina io, nivoaka mba hividy fehitenda aho ary nahita fa mangina hafahafa ny tanàna. Tsy nahagaga ahy ny tsy fisokafan'ireo fivarotana alohan'ny amin'ny 10 ora, kanefa na dia ny tsena aza toa nangina tsy tahaka ny mahazatra. Tsy misy na inona na inona ao anatiny, na dia nivarotra ahitra, frômazy, ary voasary makirana teo ivelan'ny varavarana mihidy aza ny olona. Ny sasany nanao dite anatin'ireo fivarotana kafe, saingy avoaka eny ivelany ny latabatra. Tahaka ny natao ho an'ny namana ny toerana fa tsy ho an'ny mpanjifa. Tsy mahazatra. Heveriko fa noho ny fety shiita androany- ny Achoura, izay fahatsiarovana ny martioran'i Hussein ibn Ali- no antony tsy mampisy ny tsena. Gaga tamin'ny fikatonan'ny trano fivarotana aho, satria tsy noheveriko fa tanàna tena shiita i Gandja, tsoriko anefa fa tsy fantatro tsara ny tanàna, vao in-droa aho no taty teo aloha.
Nivory teo anoloan'ny moske lehibe teo afovoan-tanàna ny olona. Nikapo-tena taminà japy kely mainty ny lehilahy. Tsy tena mandratra ny tenany ry zareo – fihetsika famantarana fotsiny ilay izy.
Nanoratra tao amin'ny Windows on Eurasia i Paul Goble tamin'ny taon-dasa, namelabelatra ny fomba fankalazan'ny mponina ao Azerbaijàna io fety io amin'ny fanomezan-drà fa tsy amin'ny fandatsahana izany.
Manomboka miseho amin'ny endriny tena hafa ny fankalazana ny Achoura, araka ny fahafantaran'ireo mpino io andro io, […] ao […] Azerbaijàna, izay shiita manaraka ny fomban-drazana ny androatokon'ny mponina, ka miantso ny mpino hanamarika io hetsika io, tsy amin'ny fandatsahana ny rany amin'ny tsy antony, fa kosa amin'ny fanomezana izany any amin'ny tobin-drà ho an'ireo ankizy mila rà.
Na tamin'ny vanimpotoana sovietika aza, maro ireo Shiita ao Azerbaijàna no nanamarika ny ‘Achoura’ tamin'ny fomba nentin-drazana. Ary raha mbola manaraka izany ny sasany vitsivitsy, maro tamin'ireo kosa no nanapa-kevitra hanaraka ny vondrompiarahamonina Jouma an'i Bakò, izay tamin'ny 1999 dia nandodona ireo mpikambana “handatsaka” ny rany hatao fanomezana.
Tamin'ny Desambra 2008, namoaka resadresaka iray izay nampisongadina ny fanohanany ny fomba fanamarihana ny Achoura teo anivon'ireo fomba fijery hafa momba ny silamo ao Azerbaijàna maoderina i lqar İbrahimoğlunun Bloqu, izay nitsikera tsy mivilivily ireo manampahefana any Bakò.